प्रधानमन्त्रीले डाके मन्त्रिपरिषद् बैठक
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएपछि पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद बैठक बस्न लागेको हो। साँझ ५ बजे बालुवाटारमा बस्ने गरी बैठक डाकिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए। सर्वोच्च अदालतले ...
झापा : पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूल लोड गरिएका गाडीहरूमा लत्ताकपडासहित अन्य सरसामान अवैध रुपमा नेपाल भित्रिने गरेको घटना बाहिरिएको छ। भारतबाट त्यसरी भित्रिने गरेका गाडीहरूले मेची भन्सार कार्यालय काँकडभिट्टामा तरकारी तथा फलफूलको मात्र राजस्व तिर्ने र...
मदनभण्डारी राजमार्गको गुल्मी खण्डमा सेफ्टी वाल निर्माण
१४ फागुन, गुल्मी । गुल्मीमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडक सेफ्टी वाल निर्माण गर्न थालिएको छ । मदनभण्डारी राजमार्गको गुल्मी खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको सडकमा सेफ्टी वाल निर्माण गर्न थालिएको हो । यसले सडकमा बढ्दो सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको...
गोरखा । बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ । दशबर्षे जनयुद्धका क्रममा राज्यपक्षबाट मारिएका प्रथम शहीद दिलबहादुर रम्तेलको स्मृति दिवसका अवसर पारेर सार्वजनिक बिदा दिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टले जानकारी दिए । “जनयुद्धका प्रथम शहीद रम्तेलको स्मृति दिवसका अवसर...
माथिबाट झरिरहेको पानीको आकर्षक छहरा, वरिपरि हरियाली जङ्गल, त्यसमाथि चराचुरूङ्गीको चिरविर आवाज, यस्तो सुन्दर दृश्यले कसको मन लोभिदैन र ? यसरी मन लोभ्याउने प्रकृतिको सुन्दर उपहार, अनुपम र आकर्षक छहरा झरना जोरायल गाउँपालिका–२ छतिवनमा पर्दछ । पछिल्लो समय ती झरना...
कपिलवस्तु अस्पतालमा भेन्टिलेटर र आइसियु सेवा सञ्चालन हुँदै
कपिलवस्तु : कपिलवस्तु जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवामा रहेको कपिलवस्तु अस्पतालमा भेन्टिलेटर, आइसियु, सेवासमेत थप हुने भएको छ। अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. किशोर बन्जाडेले अस्पतालमा ४ बेडको भेन्टिलेटर र १० बेडको आइसियु सञ्चालनको तयारीको अवस्थामा रहेको बताए। सङ्घीय सांसद बृजेशकुमार गुप्तले सांसद...
जयमान बुढा मगर रुकुमपूर्व : फागुन २३ गते देखि जिल्लाका सबै वडामा खोप केन्द्र स्थापना गरी वडागत रूपबाट कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। कोरोनाविरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ तेस्रो चरणको खोप अभियानमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुकुमपूर्वको व्यवस्थापनमा जिल्लाका सबै वडामा खोप केन्द्र...
आफ्नै आँगनमा मृत भेटिए सहायक प्रधानाध्यापक
दाङ । घोराही उपमहानगरपालिका–१०, सौंडिकुला निवासी श्रीधर घिमिरे आफ्नै आँगनमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । अन्दाजी ४३ वर्षीय घिमिरे लमडरुवाका माविका सहायक प्रधानाध्यापक हुन् । बच्चासहित श्रीमती माइतीको गएका कारण बिहीबार राति घिमिरे एक्लै रहेको प्रहरीले जनाएको छ...
सरकारले फागुन २३ गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिक तथा दीर्घरोगीलाई कोभिशिल्ड खोप लगाउने भौतिक तयारी गरिरहेको छ । विश्वका सयभन्दा धेरै देशले खोप देख्न नपाएको स्थितिमा हामीले समयमै खोप पाउनु ठूलो कुरा हो । महामारीमा खोपको प्रतिक्षा कति पट्यारलाग्दो हुन्छ भन्ने...
काठमाडौं । जिन्दगीमा आफ्नो शौख पूरा गर्नका लागि कतिपय मानिसहरु जुनसुकै हदसम्म जान तयार हुन्छन् । क्यानडाका एक युवकले आफ्नो स्वरुपलाई ड्रागनजस्तो बनाउनका लागि जुन हर्कत गरेका छन् त्यो डरलाग्दो छ । क्यानडाको भ्यानकुभरमा बस्ने जोशुआ बन्र्स नामका ती ३०...
घरको आँगनमै मृत भेटिए सहायक प्रधानाध्यापक
दाङ घोराहीका एक शिक्षक घरको आँगनमै मृत फेला परेका छन्। घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १० सौंडिकुलाका ४३ वर्षीय श्रीधर घिमिरे शुक्रबार बिहान घरको आँगनमा मृत फेला परेका हुन्। उनी मावि लमडरुवाका सहायक प्रधानाध्यापक हुन्। शुक्रबार बिहान बस चालक घिमिरेलाई लिन...
रवीन्द्र मिश्रको ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ प्रकाशनको तयारीमा
विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रको नयाँ पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा रहेको छ । ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ नामको उनको पुस्तक फागुनको अन्तिम सातादेखि बजारमा आउने भएको हो । प्रकाशनको तयारीमा रहेको उक्त किताबमा ‘कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्तावना’लाई मूल निबन्ध बनाई त्यसैको सेरोफेरोमा लेखिएका...
काठमाण्डौ - शुक्रवार पनि सुनको भाउ घटेको छ । शुक्रवार तोलाको ८८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । हिजो बिहीवार सुन तोलाको ८९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा...
यो हो २३ क्यारेट सुनबाट बनेको संसारकै महँगो बिरयानी
काठमाडौं । भारतीय खानाको परिकार बिरयानी खानाका पारखीहरुबीचमा लोकप्रिय नै छ । संसारभरका भारतीय परिकारका रेष्टुरेन्टहरुमा मुख्य मेनुकै रुपमा हुन्छ बिरयानी । खानमा स्वादिष्ट र मूल्य पनि ठिकठाक नै हुने भएको हुँदा धेरैको रोजाइमा पर्दछ यो । तर दुबईस्थित एक...
भारतका अर्बपति व्यापारी मुकेश अम्बानीको घरबाहिर एक शंकास्पद कार देखिएपछि अनुसन्धान जारी छ । गाडीमा भेटिएको चिट्ठीले धेरै कुरा खुलासा गरेको छ । चिट्ठीमा लेखिएको छ, ‘यो त ट्रेलर मात्र हो । नीता भाउजू, मुकेश दाजु, यो त झलक मात्र...
हरिवंश आचार्य, नामै काफी छ । नाम सुन्नासाथै जो कोहीका मुहारमा हाँसो छचल्किन्छ । उनले बोल्न थाल्दा धेरैको हाँसोका फोहोरा उठ्छ । अझ व्यङ्ग्य नै कस्दा दर्शक पेट मिचीमिची हास्छन् । उनीभन्दा उमेरले केही पाको मदनकृष्ण श्रेष्ठको हाउभाउ पनि उस्तै...
माइतीघरमा विकासका नाममा जारी प्रतिगमनविरूद्ध प्रदर्शन(तस्बिरहरू)
काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विकासका नाममा जारी प्रतिगमनविरूद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। बृहत् नागरिक आन्दोलन,उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति, नेवा: देय् दबूको संयोजनमा विभिन्न खल:पुच:मोर्चा/अभियानले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सुकुम्बासीलाई आदिवासी बनाउन पाइँदैन,कानुनी राज्यको प्रत्याभूत गर, सर्वोच्च आदेशको पालना गर,...
ताबुकको सिरानी र खुबुसको प्याकेट
कविता ताबुकको सिरानीले कक्राएको गर्धन सिधा समेत बनाउन नपाई जोतिइरहेछ ऊ रात्रिको अन्तिम प्रहरदेखि नै एकोहोरो, एकनास, चेतनाशून्य यन्त्र जस्तै। सुपरभाइजरको लातसँगै झस्केर ब्युझेको अहिलेसम्म सोध्न पाएको छैन घरमा सन्चो, बिसन्चो, आपत विपद अन्यौलमा छ, राति देखेको त्यो भयानक सपनाको...
काठमाडौं । इटालियन ब्राण्ड भेस्पा र अप्रिलियाको नयाँ शोरुम गोरखाको हरमटारी र तनहुँको आबुखैरेनीमा खुलेको छ । उपत्यका बाहिर (मोफसल) का यी दुई स्थानमा कम्पनीले पहिलो पटक नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याएको हो । बिहिबार एक कार्यक्रमकाबीच कम्पनीले औपचारिक रुपमा...
उपत्यका फेरि देखियो बर्डफ्लु
काठमाडौं । काठमाडौं तारकेश्वर नगरपालिका–१ साङ्लामा फेरि बर्ड फ्लु देखा परेको छ । शंकास्पद क्षेत्रमा बिहिबार परिक्षण गर्दा पुनः बर्डफ्लुको प्रकोप देखा परेको हो । बर्डफ्लुको संक्रमण देखा परेसँगै अहिले सो क्षेत्रमा पालिएका कुखुरा, चल्ला, अण्डा र दाना नष्ट गरिएको...
नेपाली कांग्रेसका नेता नवीन्द्रराज जोशीलाई मस्तिष्काघात भएको छ । गए राति स्वास्थ्यमा समस्या आई अप्ठ्यारो महसुस भएपछि उनलाई राति नै पहिले वीर अस्पताल र पछि थप उपचारका लागि थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल लगिएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । पूर्वमन्त्री जोशीलाई बिहान...
जुम्ल्याहा दाजुभाइ शल्यक्रियापछि बने दिदी बहिनी, हजुरबुवाले सम्पत्ति बेचेर दिएका थिए सर्जरीको पैसा
ब्राजिलमा बस्ने दुई जुम्ल्याहा दाजुभाइले आफ्नो जीवनमा धेरैजसो कुरा सँगसँगै गरे र दुबैले ट्रान्सजेन्डर शल्यक्रिया पनि गराएर रेकर्ड कायम गरेका छन् । १९ वर्षका यी जुम्ल्याहा शल्यक्रिया गरेपछि युवती बनिसकेका छन् । मायला र सोफियाका अनुसार उनीहरु वाल्यकालदेखि नै केटाले...
हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधि १२ जिल्लामा खुवाइने
काठमाडौं—सरकारले राष्ट्रिय हात्तीपाईले रोग निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत ५ वटा प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा औषधि खुवाइने भएको छ । चैत २० गतेदेखि झापा, मोरङ, धनकुटा, बारा, लम्जुङ, पर्वत, बाग्लुङ, दाङ, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया र कैलालीमा मसान्तसम्म आम औषधि खुवाउने कार्यक्रम तय...
काठमाडौंँ । आफूमाथि दुरव्यवहार गर्ने अभिनेता पल शाहले निखित माफी माग्नुपर्ने नेपाल चलचित्रकर्मी महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष अरुणकुमार प्रधानले बताएका छन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको जानकारी सहित उक्त माग राखेका हुन् । पलले मान्छेहरु बोलाएर आफूमाथि...